निर्वाचन विशेषः दाङ खबर – DangKhabar
अग्रता / जीत
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार १०:०१
कांग्रेस पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीलाई कारबाहीको सिफारिस
२७ मंसिर, पोखरा । निर्वाचानमा आत्मघाती रुपमा विपक्षी पार्टीलाई जिताउन लागि परेको भन्दै नेपाली कांग्रेस तनहुँले कांग्रेसका पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशी र अन्य २ जनालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबिरुद्ध बागी उम्मेदवारी दर्ता गराएर निर्वाचन आयोगले खारेज गरेपछि जोशीले विपक्षी पार्टीलाई जिताउन भूमिका खेलेको भन्दै कारबाहीका लागि केन्द्रमा सिफारिस गरिएको हो । ‘पौडेकाविरुद्ध स्वतन्त्र उम्मेदवारी भन्दै मनोनय दर्ता गराएका जोशीले आयोगले उम्मेदवारी खारेजी गरेपछि विपक्षी पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन लागेकाले जोशी र उनका समर्थक, प्रस्थावकलाई कारबाही सिफारिस गरेका हौं,’ कांग्रेस तनहुँ सभापति वैकुन्ठ न्यौपानेले भने, ‘उहाँले योजनावद्ध रुपमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलाई हराउन लाग्नुभएको थियो ।’ जोशीसँगै प्रस्थावक, समर्थक
पुरा पढ्नुहोस् >>
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०९:५१
मोरङको प्रदेशसभामा कसले कति सिट जिते ?
बिराटनगर, मंसिर २६ । मोरङमा प्रतिनिधिसभाको तुलनामा प्रदेशसभामा बाम गठबन्धनले कम स्थानमा जित हासिल गरेको छ ।प्रतिनिधिसभामा उत्साहजनक नतिजा ल्याएको बाम गठबन्धनले प्रदेशसभामा अपेक्षित रुपमा नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेको हो । प्रदेशसभातर्फ १२ सिट रहेको मोरङमा बाम गठबन्धनले ७ सिट जितेको छ भने कांग्रेसले ४ र संघीय समाजवादी फोरमले १ सिट जितेको छ । बाम गठबन्धनको तर्फबाट मोरङमा एमालेले ५ र माओवादीले २ स्थानमा जितेको छ । मोरङ क्षेत्र नम्वर १ अन्तरगत ‘क’ र ‘ख’ मा क्रमशः माओवादीका कूलप्रसाद साम्बा र एमालेका उपेन्द्र घिमिरेले विजय प्राप्त गरेका छन् । दुवै जना बाम गठबन्धनका उम्मेदवार हुन् । साम्बाले १९ हजार ५ सय ५४ र कांग्रेसका ललित अधिकारीले १५ हजार २ सय ६३ मत ल्याएका थिए । यस्तै, ‘ख’ मा एमालेका घिमिरेले १७ हजार १ सय १७ र प्रतिस्पर्धी कांग्रेसका ईश्वरी कोइरालाले १४ हजार ३ सय १० मत ल्याए ।क्
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०९:४६
अब ४ क्षेत्रको नतिजा आउन बाँकी, हेर्नुहोस् कुन क्षेत्रमा को अगाडी
काठमाडौँ, २५ मंसिर । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको मतपरिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । देशभर का ४ क्षेत्र बाहेक अन्य स्थानका नतिजा आइसकेका छन् । नतिजा आउन बाँकी ४ क्षेत्र मध्ये ३ क्षेत्रमा एमाले तथा १ क्षेत्रमा नेपाली काँग्रेसले अग्रता लिइरहेको छ । दिउँसो २ वजेसम्मको नतिजा अनुसार नेकपा एमाले ७७ स्थानमा विजयी हुँदै पहिलो बनेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले ३६ स्थानमा जित हासिल गरेको छ । नेपाली काँग्रेस २१ स्थानमा विजयी हुँदै तेस्रो स्थानमा छ । यी हुन् प्रतिनिधि सभा सदस्यको नजिता आउन बाँकी ४ क्षेत्रः प्रदेश १ को सुनसरी–३ मा रोकिएको मतगणना फेरी सुचारु भएको छ । एमालेकी भगवती चौधरी र नेपाली काँग्रेसका विजय कुमार गच्छदारको बीचमा प्रतिष्पर्धा भइरहेको सो क्षेत्रमा मतपत्रमा २० रुपैयाँको नोट भेटिएपछि विवाद हुँदा मतगणना रोकिएको थियो । सो क्षेत्रमा एमालेकी भगवति चौधरीले अग्रत
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०८:५६
वाम गठबन्धनको जितसँगै भारतमा खैलाबैला, ओलीसँग मिलेर काम गर्न मोदीलाई दबाब
काठमाडौं, २६ मंसिर । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दुईतिहाई जित हासिल गरेपछि भारतमा चिन्ता छाएको छ । भारतीय सरकार, राजनीतिक दलहरु र त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले गठबन्धनको जितले नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् । विपक्षी दल र भाजपाकै नेताहरुले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई नेपालका भावी प्रधानमन्त्री एवं वाम गठबन्धनका नेता केपी ओलीसँग मिलेर काम गर्न दबाब समेत दिएका छन् । यस्तै, भारतको प्रभावशाली अंग्रेजी पत्रिका हिन्दुस्तान टाइम्सले मंगलबार सम्पादकीय लेखेर नेपालको वाम गठबन्धनले सरकार बनाउने सुनिश्चित भएको र अब ५ वर्षे स्थिर सरकार बन्ने जानकारी गराउँदै यो समयमा चिनियाँ प्रभाव बढ्ने भएकाले मिलेर काम गर्न भारतीय संस्थापन (सरकार)लाई सुझाव दिएको छ । सम्पादकीयमा लेखिएको छ- ‘नेपालको चुनावी परिणामले भारतलाई धेरै असहज
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०८:४७
एक नम्बर प्रदेशमा बाम गठबन्धनको दुई तिहाईको सरकार बन्ने पक्का !
काठमाडौं– प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम अन्तिम भएसँगै मुलुकका सात प्रदेशमा कसको सरकार कसरी बन्छ ? भन्ने जोडघटाउ सुरु हुन थालेको छ । प्रदेश नम्बर १ को अहिलेसम्मको तथ्याङकमा आधारित रहेर यो प्रदेशमा कसको सरकार बन्दैछ ? भन्नेमा चुनावी मतपरिणामका आधारहरु केलाउँदा बाम गठबन्धनको दुई तिहाइको प्रदेश सरकार बन्ने निश्चित प्रायः देखिएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा १४ जिल्ला छन् जसमा प्रत्यक्षतर्फ ५६ सिट र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट हुन्छन् । यी मध्ये यो समाचार तयार पार्दा सम्म प्रत्यक्षतर्फको एक सिट बाहेक अरु सवै सिटको नतिजा सार्वजनिक भैसकेको छ । यो प्रदेशमा एमालेले प्रत्यक्षतर्फ नै ३६ वटा सिट जितेको छ भने माओवादी केन्द्रले १० सिट जितेको छ । माओवादी र एमालेको सिटसंख्या जोड्दा ४६ सिट हुन्छ । यो प्रदेशमा बहुमतको सरकार गठन गर्न ४७ सिट र दुईतिहाई बहुम
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०८:४३
चुनाव जितेपछि प्रभु साहलाई स्वागतमा ५१ किलोको माला
रौतहट– रौतहट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट लगातार तेस्रोपटक जित हातपार्न सफल प्रभुु साहले चुुनावी प्रचारमा आफुूले जारी गरेको घोषणापत्र अनुुसारको काम पुुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । गत मंसिर २१ गतेको निर्वाचनमा झण्डै १० हजारको मतान्तरले बिजयी भएका साहलाई कटहरियास्थित स्वागत समारोह कार्यक्रममा यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । देशमा बाम गठबन्धनको दुुई तिहाईको सरकार बनेपछि संविधानमा थाती रहेका अधिकारसमेत पुूरा गराउने उनले बाचा गरे । साहले नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवार सुुनिल यादवलाई नौहजार पाँचसय ५० मतको अन्तरले पराजित गरेका थिए । देशमा बन्ने स्थायी सरकारको अगुुआईमा रौतहट क्षेत्र नम्बर ३ को विकासको माध्यमबाट मुुहार परिवर्तन गर्ने लक्ष्य रहेको प्रस्टयाए । कार्यक्रममा कटहरिया बासीले साहलाई ५१ किलोको माला लगाएर स्वागत गरेका थिए ।
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०८:४०
नवलपरासीमा राजपा ‘पत्तासाफ’, यी हुन् चार कारण
परासी– नवलपरासीमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा राजपा नेपालका कुनै पनि उम्मदेवारले जित्न सकेनन् । जिल्लाको बर्दघाट सुस्ता पश्चिम प्रतिनिधि सभा १ र २ मा उम्मेदवारी दिएका राजपाका उम्मदेवारहरुले चुनाव जित्न नसकेपछि जिल्लामै राजपाको चर्काे आलोचना सुरु भएको छ । मधेश र मधेशी जनताको हक–अधिकारका लागि लामो समयदेखि लड्दै आएको राजपाले मधेशक्षेत्रमै जित्न नसकेपछि यहाँ राजपाको आलोचना हुन थालेको हो । मधेश आन्दोलन र अधिकारको लडाईमा सधंै अग्रसर रहेको पार्टीलाई जिल्लाका मधेशी जनताहरुले निकै सहयोग र साथ नदिएका भने होइनन् । तर, मधेशी जनताको सहयोग र साथका बावजुद पनि जिल्लामा सो पार्टीले एक सिट पनि जित्न नसक्दा मतदातामा खुशीको सञ्चार हुन सकेन । राजपा नेपालले जिल्लाको प्रतिनिधिसभा १ मा अरुणकुमार सिंहलाई उठाएको थियो भने सोही क्षेत्रको प्रदेश सभा क मा गुलाब चौधरी र प्रदेश सभा ख मा असरफ अलि चुरिहारल
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०७:३२
अपडेट: समानुपातिकमा एमाले ७५ हजार मतले अगाडि, विवेकशीलले राप्रपा र नयाँ शक्तिलाई पनि उछिन्यो
काठमाडौं, मंसिर २६ । प्रतिनिधिसभाका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतगणना जारी छ । पछिल्लो अपडेटअनुसार कांग्रेस भन्दा एमाले करिब ७५ हजार मतले अगाडि छ भने माओवादी तेस्रो स्थानमा छ । विवेकशील साझाले राजपा, राप्रपा र नयाँ शक्तिलाई समेत उछिनेको छ । अहिलेसम्म गणना भएको २९ लाख ५२ हजार २३८ मतमध्ये एमालेले १०,८५,०८९, काँग्रेसले १०,१०,५०४, माओवादी केन्द्रले ४,४४,१४९, संघीय फोरमले ७६,९४७, विवेकशील साझाले ६१,६७१, राप्रपाले ५६,८२९, राजपाले ५१,६५४, नयाँ शक्तिले ३३,६९८, जनमोर्चाले २६,१२६, राप्रपा प्रजातान्त्रिकले २३,२३३ र अन्य दलहरुले ८२,३३८ मत पाएका छन् ।
कञ्चनपुर ३ मा भट्ट विजयी, लेखक २५८ मतले पराजित
काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशव्यापी धक्का बेहोरेको नेपाली कांग्रेसका अर्का एक प्रभावशाली नेताले झिनो मतान्तरले चुनाव हारेका छन्। कञ्चनपुर ३ बाट कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले २५८ मतले निर्वाचनमा पराजय बेहोरेका हुन्। लेखकलाई वाम गठबन्धनका उम्मेदवार एमालेका दीपकप्रसाद भट्टले २६ हजार ३६४ मत ल्याएर पराजित गरे। लेखकले २६ हजार १०६ मत ल्याए।अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा विद्यावारिधि गरेका भट्ट २०५२ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। २०५८ सालमा राष्ट्रिय परिषद सदस्य, २०५८ मा अनेरास्ववियु अध्यक्ष र २०६७ सालमा सम्पर्क समन्वयन कमिटीका सदस्य रहेका भट्ट सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्य समेत थिए। प्रदेश नम्बर ७ बाट प्रतिनिधिसभामा १६ सिट रहेकोमा कांग्रेसले एउटामात्र सिट जितेको छ। प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डडेलधुराबाट चुनाव जितेका हुन्।
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०७:२४
निर्वाचित भएपछि मतदाताको घरदैलोमा प्रचण्ड
चितवन : नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चितवन–३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि मंगलबारदेखि मतदातालाई धन्यवाद ज्ञापनका लागि घरदैलो अभियान सुरु गरेका छन्। वाम गठबन्धनको सो क्षेत्रको निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक सूर्य सुवेदीअनुसार शिवनगरस्थित आफ्नै निवास रहेको महेन्द्र चोकबाट शुरु भएको अभियान फूलबारी, मंगलपुर, विजयनगर, रामपुर चनौली, ज्योतिनगर, पर्साढाप, गोलाघाट, लेबरनगर, शुक्रनगर हुँदै आज साँझ पार्वतीपुरको लाहुरेचोकमा आएर समापन हुँदैछ। बुधबार सोही क्षेत्रको माडी र भरतपुर महानगरपालिकाका जगतपुर, पटिहानी, गीतानगर, चोकबजार, गौरीगञ्ज हुँदै केन्द्रीय बस ट्रमिनलमा आएर अभियान समापन हुँदैछ। संयोजक सुवेदीका अनुसार गाडी नरोकीकनै दाहालले गाडी माथिबाट सबैलाई आभार प्रकट गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। मतदातालाई सडकमा नै गाडीमाथिबाट उनले धन्यवाद दिइरहेका छन्।
All Rights Reserved | Election Portal Of Dangkhabar Developed by Dang Media Group